Indlu yaseKokopelli Megisti kwiPeninsula
I-Peninsula yeyona ndawo idumileyo kwaye izolile kwisithili saseKas. Yimizuzu eli-10 kuphela yokuqhuba ukusuka kwiziko le-Kas kodwa inomoya owahluke ngokupheleleyo. Uya kubona izindlu ezintle zamatye kunye neevillas endleleni ehonjiswe ngeentyatyambo kunye neMeditera. IKapa losingasiqithi ojongene neSiqithi saseMeis phantse lisoloko linempepho kwaye nemozulu ipholile kakhulu xa ithelekiswa neKas.
Indlu yethu yenye yezindlu zokuqala ezakhiwa kwi-peninsula. Inomoya okhethekileyo kunye noyilo olunomtsalane, ukumila kwembali kunye negadi ehonjiswe ngekhala kunye neecactus ezinkulu. Kukho ibalcony enkulu yangaphambili kunye negumbi lokuphumla elinekhitshi elivulekileyo elijonge ulwandle. Unokubukela ukutshona kwelanga okumangalisayo kwibalcony apho unokubona iSiqithi iMeis ukusuka kwelinye icala kunye neMeditera kwelinye. Unokuhlala kwindawo elula yokufikelela kumbindi weKaş kwaye wonwabele indawo ezolileyo nezolileyo ngaxeshanye.
Ejikeleze indlu yethu, kukho iilwandle ezininzi zehotele ezithe cwaka kwaye zinesitayile kunolwandle olusembindini. U-Aquarius, uBarbarossa kunye no-Çapa zezinye zazo. IHidayet Bay edumileyo, i-Incebogaz kunye nePublic Beach ziimizuzu emi-5 kuphela xa uqhuba.
Eyona nto ikhethekileyo kulosingasiqithi yimpepho yayo. Ungahlala kwibalcony kwaye ujabulele impepho ngelixa iziko leKas litshisa. Enye into ekhethekileyo kukuzola kwayo. Unokuchitha ixesha ngoxolo kwi-peninsula nakwincopho yexesha lonyaka. Izindlu zamatye ezihonjiswe nge-bougainvillea, i-azure yeMeditera kunye nesibhakabhaka esikroba kuluhlaza. I-peninsula inikezela ngamava ahluke kakhulu eKas.
Unokuhlala ufikelela kuthi ngokulula ngayo nantoni na oyifunayo.